संरचनात्मक र कार्यात्मक - आजको निर्माताहरु आफ्नै विशेषताहरु छ कि हेडफोन को प्रकार को एक किसिम प्रस्ताव। संरचना, ध्वनि गुणवत्ता, मूल्य को ध्वनिक गुण - यी जो हामी एक विशेष मोडेल छनोट मापदण्डहरू छन्। के हेडफोन तपाईं अनुरूप र जब तिनीहरूलाई छनौट विचार के?
हेडफोन को कुनै पनि प्रकार - एक TRS कनेक्टर (उहाँमार्फत तिनीहरूले उपकरणहरू जडान छन्), केबल र कान पैड दुई कप। विभिन्न सामाग्री अन्तिम गरे, तर नरम र सजिलो छ जो सिलिकन, अधिकांश। एक धनुष वा Headband टाउको वा घाँटी को शीर्ष कवर - को उपरि हेडफोन अर्को टुक्रा छ। सबै मोडेल जो चार छन् टाउको, मा माउन्ट को विधि द्वारा प्रतिष्ठित छन्:
क्लासिक। हेडफोन को कप जडान लोचदार nadtemennymi arches निश्चित छन्। खैर, धनुले पनि, फरक हो: सबै भन्दा विश्वसनीय - आत्म-मिलाउने, यो Arcs र बैंड को एक संरचना हो; स्लाइड प्रयोग गर्न सजिलो bow; ढाला प्लास्टिक धनुष आवश्यक छैन यो कप आफूलाई सार्न पर्याप्त छ रूपमा, स्थापित छ।
उनको टाउको पछाडि माउन्ट। सुसज्जित कचौरा जडान गर्ने लोचदार Headband संग हेडफोन केही प्रकार, मात्र टाउको पछाडि यो बनाउँछ। यो निर्माण कप आफूलाई को वजन मा नेभिगेट गर्न छनौट गर्दा त महत्त्वपूर्ण कुरा, कान मा यांत्रिक लोड पीडित।
कान माउन्ट। हेडफोन जस्तै मोडेल कान वा क्लिप BTE मा माउन्ट छन्।
बन्धन बिना। यी मोडेल मात्र फोम कान पैड, को auricle स्थित जो छन्।
कसरी जडान गर्न?
आजको निर्माताहरु तार हेडफोन विभिन्न प्रस्ताव। निम्न को जडान को प्रकार:
पहिलो विकल्प उपरि र लागि उपयुक्त छ पूर्ण आकार हेडफोन। तिनीहरूले कप पहिलो कप देखि जा, दोस्रो ट्याप जडान गर्न गरिन्छ गर्दा, एक कप तल गरौं, प्लग तार को एक हो। एकल-पक्ष एक प्रमुख बेफाइदा छ: जहाँ साधारण तार कचौरा शामिल छ क्षेत्र, उत्तरार्द्ध अक्सर खण्डन वा izlamyvaetsya।
हेडफोन केही प्रकार दुई-तरिका जडान - झूटो र intracanal छ। यो विधि मा, प्लग देखि विस्तार जो एक साधारण तार, दुई भागमा विभाजन र तिनीहरूले कप गर्न खुवाइन्छ। सदस्य यी हेडफोन तिनीहरूले अक्सर गिर रूपमा कान बाहिर, सबै भन्दा सहज छैन भनेर याद, र पर्याप्त लामो छ कि तार, निरन्तर मुड र tangled।
त्यहाँ हेडफोन जडानहरू विभिन्न प्रकारका छन्। तिनीहरूले दुई हो: 6.3 मिमी र 3.5 मिमी। सबैभन्दा मोडेल, दोस्रो कनेक्टर, तर पनि पहिलो साधारण को, त्यसैले यसलाई कनेक्टरों दुवै प्रकारका समर्थन गर्न सक्ने बहुमुखी हेडसेट चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
प्लग-इन निर्वात वा गलत?
हेडफोन को आधुनिक प्रकार - निर्माण र डिजाइन को एक किसिम। यो हरेक ग्राहक तपाईं के चाहनुहुन्छ र उहाँलाई सहज पाउनुहुनेछ सुनिश्चित गर्दछ। को आवेषण कान मा सम्मिलित छन् बुझे गर्न छनौट गर्दा, जबकि उपरि मोडेल श्रवण को अंग आसन्न। कारण फरक earpads, मुलायम रोल, कारण फिट को डिग्री जो सुन्न सान्त्वना सुनिश्चित छ गर्न। को याद हेडफोनको जो कान वरिपरि छन् earpads SUPRA-aural, तर पूर्ण यसलाई कवर गर्दैन - circum-aural-कान तकिये, र उपरि मोडेल बाहिर ध्वनि फैलाउने हटाउनु द्वारा complemented छन्।
प्लग-इन मोडेल अन्यथा आवेषण रूपमा परिचित छन् कि, यो compactness धेरै सहज धन्यवाद छ। साथै, तिनीहरूले अक्सर एक आकर्षक डिजाइन छ। उदाहरणका लागि, स्टाइलिश समाधान - एक macaroon वा अन्य मिठाई रूपमा हेडफोन, coquetry को छवि जोड छ। सम्मिलित भन्दा धेरै राम्रो छ तर ध्वनि र ध्वनि गुणवत्ता अझै पनि निर्वात हेडफोन मा कान पैड छ। पनि त बाहिर कुनै हल्ला आफ्नो मनपर्ने संगीत सुन्ने गर्नबाट रोक्न छैन, हेडफोन धेरै क्लीनर ध्वनि को निर्वात मा याद गर्नुहोस्।
झूटा र unprofitable मोडेल भिन्नता - emitter झिल्ली को आकार छ। 30 र थप मिमी देखि, ध्वनि प्रदर्शन को सुधार मा प्रभाव कि - यस निर्वात मोडेल, यो सानो, माथि 12 मिमी, जबकि उपरि हेडफोन ठूलो झिल्ली गरेको छ।
आफ्नो फोन को लागि
जहाँ हामी अक्सर संगीत वा अडियो पुस्तक सुन्न? तरिकामा, सही छ। र यो हेडफोन राम्रो थियो, बाहिर ध्वनि दिनुभएन र कान मा आराम बसे धेरै महत्त्वपूर्ण छ। डिजाइन आधारमा आफ्नो फोन लागि हेडफोन को प्रकार निम्न छन्:
सम्मिलित: यो सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प, सबै भन्दा अक्सर यस्तो मोडेल उपकरण नै साथ आपूर्ति गर्दै छन् छ। तिनीहरूले सस्तो हो, तर ध्वनि गुणस्तर, र ध्वनि स्तर राम्रो छैन।
प्लग-इन: तिनीहरूले "थोपाहरूद्वारा" वा "प्लग" भनिन्छ। तिनीहरूले, आफ्नो कान मा बस्न छन् वृद्धि soundproofing असर जो आफ्नो कवर, बन्द गर्नुहोस्।
झूटा: यो, उत्कृष्ट विकल्प छैन तिनीहरू पनि समग्र हुन्, तिनीहरूलाई आफ्नो फोन असुविधाजनक छ लागि आफ्नो झोला मा तपाईं संग बोक्न।
सबै वा हेडफोन प्रयोग आधारमा audiophile, वा विशेष छन्। पहिलो ध्वनि प्रजनन एक उच्च स्तर मा छ, र विशेष मोडेल सुनेपछि impairments संग मान्छे को लागि गरिन्छ भनेर हिसाब।
स्थान र गुणस्तर
हेडफोन खरीद, हामी तिनीहरूलाई मा सहज बनाउने प्रयास, ध्वनि राम्रो छ, र कर्ड tangled छैन। laces वा बिरालो कान को रूप मा हेडफोन सहित धेरै मोडेल, सुन्दर देखिने, तर वास्तवमा सबैभन्दा कार्यात्मक हुन बाहिर बारी। विकल्प निर्देशित हुनु हुँदा जहाँ संगीत सुन्न - घर भित्रका वा बाहिर। , राम्रो उहाँले भन्दा राम्रो छ ध्वनि हुनेछ: साथै, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका आफैले पोर्टेबल खेलाडी प्ले छ।
हेडफोन केही मोडेल एक लामो समय को लागि संगीत सुन्न गर्नेहरूका लागि धेरै उपयुक्त छैन। तसर्थ, उपरि हेडफोन टाउको र कान मा दबाव छ रूपमा बेचैनी मात्र एक घण्टा पछि कारण सुरु गर्नुहोस्। साथै, उपरि मोडेल सर्वश्रेष्ठ घरमा लगाउने छ। सडक संस्करण उपयुक्त संकुचित आवेषण लागि, यसबाहेक, तिनीहरूले विभिन्न आकार कान तकिये संग सुसज्जित छन्। हेडफोन थप प्रत्येक प्रकार को सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्।
प्लग: आधुनिक र संकुचित
यदि तपाईं - सुविधा र साना आकार लागि, मा-कान हेडफोन तपाईं मनपर्छ। तिनीहरूले के को लागि राम्रो हो? पहिले, तिनीहरूले आफ्नो खल्ती मा पनि फिट त सजिलो, संकुचित छन्। दोस्रो, तपाईं सान्त्वना तिनीहरूलाई लगाएका प्रदान आकार कान पैड चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो, तिनीहरूले डिजाइनमा विविध छन्। उदाहरणका लागि, कसैले सोनी देखि क्लासिक र laconic मोडेल छनोट गर्छ, र कसैले बिजुली को रूप मा मूल हेडफोन रुचि हुनेछ।
अर्कोतर्फ, किनभने प्लग-इन मोडेल को डिजाइन सुविधाहरू धेरै ध्वनिक गुण गुमाए। साथै, कान भित्र विदेशी शरीर हुँदा सबैले रुचि। उद्धार कि-कान हेडफोन शीर्ष ब्रान्डहरु बीच, तपाईं फिलिप्स, Shure, Sennheiser चिनो लगाउन सक्नुहुन्छ।
वैक्यूम: अधिकतम सुविधा
वैक्यूम हेडफोन दैनिक प्रयोगको लागि आदर्श हो। तिनीहरूले सजिलो, राम्रो ध्वनिक विशेषताहरु आकर्षित। सिलिकन कान पैड ड्राइभिङ earphones बाहिर गिर हुँदा पनि, कान मा कस बस्न जो धन्यवाद। कम तौल र संकुचित आयाम सम्भव हेडफोन र झोला र खल्ती भण्डारण गर्न बनाउन। राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन - प्रजाति डाटा distinguishes अर्को फाइदा। र खुसी आवाज गुणस्तर - यो शक्तिशाली र मोटा छ, त्यसैले तपाईं उत्कृष्ट गुणस्तर तपाईंको मनपर्ने संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ। निर्वात हेडफोन ब्रान्डहरु को लोकप्रिय मोडेल हो सोनी, AKG, Sennheiser, BEYERDYNAMIC - तिनीहरूले किफायती मूल्य आकर्षित एक दक्षता संग।
झूटा: ठूलो आवाज
हेडफोन विभिन्न आकार मा आएको, तर तिनीहरूले राम्रो ध्वनि, सान्त्वना र स्टाइलिश डिजाइन को हो। यी मोडेल खुला वा बन्द हुन सक्छ, तर लोकप्रिय मोडेल को लागि दोश्रो किसिम हो। रक देखि हिप-हप गर्न - त्यसैले तपाईं कुनै पनि शैली मा उच्च गुणवत्ता मा ट्रयाक सुन्न सक्नुहुन्छ कान झिल्ली संग सम्पर्क, धेरै राम्रो छ जसमा हेडफोन चयन, प्रयोगकर्ताहरूले।
आनन्द हेडफोन कहीं हुन सक्छ, तर किनभने समग्र धेरै को आफ्नो घर चयन गर्न रुचाउँदैनन्। एक समझौता - खुला कप बाँकी छन् जो एक अर्ध हेडफोन, तर प्वालहरू बन्द विशेष बारहरू वा राम्रो जाल छन्। लोकप्रिय उत्पादन उपरि हेडफोन AKG, JBL, Harman Kardon सोहो, DENON।
मनिटर: आफ्नो कम्प्युटरको लागि सबै भन्दा राम्रो
कम्प्युटर सहयोग को लागि हेडफोन विभिन्न प्रकारका र संगीत सुन्न, र पीसी लागि खेल्छन्। तिनीहरूले आकार मा कस बन्द कान छन् कि एक ठूलो Headband र कान पैड द्वारा ठूलो छ, त्यसैले विशिष्ट छन्। एक परिणाम रूपमा यी मोडेल गुणवत्ता ध्वनि प्रेमीहरूलाई लागि राम्रो हो। तर यी मोडेल को वजन एकदम उच्च छ। ध्वनि विकृति बिना सबै स्पेक्ट्रा मा प्रसारित छ यस्तो छ कि हेडफोन को डिजाइन सुविधाहरू। मनिटर हेडफोन को विशिष्ट सुविधाहरू समावेश:
विस्तृत दृश्य र एक ठूलो व्यास झिल्ली, विभिन्न ध्वनि स्रोतहरू को स्थिति सुधार जो;
को एकरूपता र आवृत्तियों को ब्यालेन्स;
ध्वनि शान्त छ किनभने frail उपकरणहरूमा संगीत सुन्नुहुन्छ किनभने जो प्रतिरोध को धेरै, छैन रोचक।
स्टूडियो मनिटर हेडफोन एक किसिम कि आवाज गुणस्तर काम गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै कम लोकप्रिय हेडफोन, साथै एक माइक्रोफोन संग सुसज्जित छन् जो। उहाँले यस्तो स्काइप र अनलाइन गेमिङ संग, काम चाहिएको छ। यो घर मा चलचित्र हेर्दै गर्दा, उदाहरणका लागि, प्रयोग गर्दै मनिटर हेडफोन थुप्रै कि उल्लेखनीय पनि छ। तर किनभने ठूलो वजन तिनीहरूले धेरै असुविधा सिर्जना गर्नुहोस्। अग्रणी निर्माताहरु हेडफोन निगरानी बीचमा राम्रो जस्तै AKG, BEYERDYNAMIC, Sennheiser रूपमा ब्रान्डहरु स्थापित याद गर्नुहोस्।
आधुनिक प्रविधिको थप र अधिक लोकप्रिय त्यहाँ वायरलेस हेडफोन को विभिन्न प्रकार छन् भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। आफ्नो सुविधा - उच्च आवाज गुणस्तर उर्तानु गर्न, र तिनीहरूले इन्फ्रारेड वा रेडियो छालहरू को दायरा मा ट्रान्सीवर को आधार मा काम। तार को कमी, जो मोड्नु धेरै - इन्फ्रारेड हेडफोन उत्कृष्ट ध्वनि गुणवत्ता, गतिशीलता र सबै भन्दा महत्वपूर्ण राम्रो हो। कारण हो र जडान कायम जो कम्प्युटरमा वायरलेस हेडफोन काम ब्लुटुथ आधारित संयोजनमा प्रयोग गर्दा। यो संयोजन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न संगीत, कुराकानी वा खेल सुनेर, काम हुन सक्छ।
त्यहाँ स्टाइलिश र आधुनिक वायरलेस छन् ब्लुटुथ हेडसेट मोबाइल उपकरणहरूको लागि, पाटी, तथापि, आफ्नो लागत पनि उच्च छ। एलजी HBS-730, Sven एपी-B770MV, PLANTRONICS BackBeat जाओ 2: सस्ता मोडेल कम्प्युटर वा टेलिभिजन लागि डिजाइन बीचमा, निम्न छन्।
कम्प्युटर गेम खेलाडीहरूलाई संख्या हरेक दिन बढ्दै छ, विश्व कब्जा गरेको छ। र गेमिङ हेडसेट प्रयोगकर्ता बस विशाल आवश्यकताहरू:
तिनीहरूले चिटिक्क मोडेल निर्मित छन् ध्वनि कार्ड, तपाईंले आवाज मोड चयन गर्न अनुमति ध्वनि खेल को सम्पूर्ण दायरा पारित गर्नुपर्छ र तपाईंले तुल्यकारक अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
खेल एक घण्टा द्वारा ढिलाइ हुन सक्छ किनभने हेडफोन, सहज हुनुपर्छ। सहज Headband, निर्माण सजिलो, सहज कान कप - यो छनौट गर्दा ध्यान लायक सबै को लागि।
सुविधाजनक प्रयोग - खेल समयमा तपाईं सजिलै यो लागि गेमप्लेको दखल बिना ध्वनि, वा माइक्रोफोन समायोजन गर्न सक्ने एक प्रतिज्ञापत्र।
हेडफोन उच्च गुणवत्ता को हुनुपर्छ को माइक्रोफोन - साँचो खेलाडीहरूलाई बिना बस गर्न सक्नुहुन्न!
राक्षस बीट्स: समीक्षा लोकप्रिय मोडेल
शायद सबैलाई उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता र स्टाइलिश डिजाइन ड्र कि खरीदारों देखि हेडफोन बीट्स धेरै ध्यान थाह छ। प्रकार यी सामान एक ठूलो विविधता मा प्रस्तुत छ, र प्रत्येक नयाँ उत्पादन आनन्द पूरा गर्दछ। एक आरामदायक सुन्न दानव प्रदान बीट्स भ्रमण, संकुचित गर्दै छन्, राम्रो तरिकाले आफ्नो कान मा बस्न, त्यसैले तपाईं उच्च गुणवत्ता मा संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ। सक्रिय जीवन शैली प्रेम दानव कदर हुनेछ Powerbeats, जो आफ्नो कान को peculiarities तिनीहरूलाई समायोजन गर्न सकेसम्म धेरै हुन सक्छ बीट्स। कम लागत मोडेल निगरानी हेडफोन दानव कुट्छ एक्लै HD, जो एक राम्रो ध्वनि र संकुचित आकार फरक छ। बीचमा व्यावसायिक मोडेल दानव बीट्स जो कुनै पनि संगीत उपकरणहरू र ग्याजेटहरू संग संयुक्त र उच्च गुणस्तर, दुई तार र बहुमुखी प्रतिभा को हुन् स्टुडियो समावेश। यो लोकप्रिय ब्रान्ड को हेडफोन बीचमा आराम, कार्यक्षमता र सौंदर्य को आफ्नो विचार सुहाउने कुरा पत्ता लगाउन सजिलो छ।
आजको निर्माताहरु हामी हरेक दिन प्रयोग गर्ने सामान प्रतिबिम्बित छन् जो नवीन समाधान, प्रस्ताव। उदाहरणका लागि, त्यहाँ ब्रान्ड ग्लो द्वारा चमकीले हेडफोन को विशेष प्रकार हो। तिनीहरूले एक विशेष ग्लास फाइबर, तार मा सम्मिलित छ जो संग सुसज्जित छन्। उहाँले, बारी मा संगीत समय मा, pulsing। ग्लो विशिष्टताको छ कि पूर्ण Android मा उपकरणहरू संग संयुक्त यस इयरफोन छ। विशेष हेडफोन मात्र तस्वीर लिन वा आवेदन को एक किसिम काम गर्न संगीत सुन्न सक्दैन, तर पनि। खैर, यो उल्लेख गर्नुपर्छ ध्वनि शुद्धता र उत्कृष्ट गुणस्तर।
बिरालो कान को रूप मा हेडफोन मद्दत गर्न एक flirty तरिका सिर्जना गर्नुहोस्। यस्तो मोडेल जापान मा जारी गरिएको छ र र संगीत प्रेम र बिरालोहरु गर्ने, ती अपिल हुनेछ। स्टाइलिश र रंगीन फारम बिरालो कान, बाहेक, तिनीहरू अन्धकारमा चमक। तपाईं सजिलै आफ्नो बाटो अनुरूप छ के टिप्न सक्छन् रंग योजनाहरु, धेरै फरक योजना छन्। र ट्याबहरू को रूप मा हेडफोन तपाईं अनुरूप छैन भने, अन्य मूल र फैशन चयन गर्नुहोस्।
नयाँ र रोचक ग्याजेटहरू। गृह लागि आधुनिक रोचक ग्याजेटहरू
आईप्याड प्रो: सिंहावलोकन र सुविधाहरू
गोली सैमसंग P5200: सुविधा र समीक्षा
ई-पुस्तक गोमेद Boox Amundsen: समीक्षा, डिजाइन विनिर्देशों
किन छैन माइक्रोफोन र यो समस्या सामना गर्न कसरी
तपाईं शरीर देखि toxins कसरी प्राप्त गर्न लाग्छ? तिनीहरूले अवस्थित गर्छन्?
"सोडियम बिकारबोनिट": intravenously प्रयोगको लागि निर्देशन। "सोडियम बिकारबोनिट-Eskom": प्रयोगको लागि निर्देशन
अभिनेता एलेक्स कैटिस्वि: जीवनी, चलचित्र चलचित्र
Vitaliy Vishnevsky विश्व चैंपियन हो